भनिन्छ बिहान सबेरै उठ्दा आधा रोग त त्यसै पनि निको हुन्छ ,बिहान सबेरै उठ्दा कस्ता कस्ता फाइदा हुन्छन ? | भनिन्छ बिहान सबेरै उठ्दा आधा रोग त त्यसै पनि निको हुन्छ ,बिहान सबेरै उठ्दा कस्ता कस्ता फाइदा हुन्छन ? – हिपमत
भनिन्छ बिहान सबेरै उठ्दा आधा रोग त त्यसै पनि निको हुन्छ ,बिहान सबेरै उठ्दा कस्ता कस्ता फाइदा हुन्छन ?
भनिन्छ बिहान सबेरै उठ्दा आधा रोग त त्यसै पनि निको हुन्छ ।अर्थात घाम झुल्किनु अघि उठ्दा हुने सका रात्मक भावले नै मानिसहरुमा आ त्मवल समेत बढ्ने बताइन्छ । सुत्ने र उठ्ने तालिका नमिल्दा नै रोगै रो गको भय हुन्छ ।यस्तो अस्तव्यस्त दैनिकीले मानिसको दिनचर्या त खरा ब हुन्छ नै, कैयौं खालका शारीरिक रोगहरुको चपे टामा समेत परिन्छ ।बिहान अबेरसम्म सुत्ने मानिसहरुमा मानसिक रोग, मोटोपना, आलस्यता, मु टुरोग जस्ता विभिन्न सम स्या निम्तन सक्छन् ।
दिनभरको थकानले शरीरको नरा म्रो हाल त हुन थाल्छ । समयमै सुत्ने र समयमै उठ्ने गर्नाले यस्ता सम स्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।एक वैज्ञानिक अध्ययनको अनुसार जो मानिस बिहान छिट्टै उठ्छन् उनीहरुमा डिप्रेश नको सम्भावना पनि धेरै नै कम हुन्छ ।
शोधको नेतृत्व गरेका कोलोराडो बोल्डर युनिभर्सिटीका डाइरेक्टर सेलिन वेटरका अनुसार विहान छिटै उठ्नाले कैयौ स्वास्थ्य लाभ हुन सक्छ।छिट्टै उठ्न थालेको केही दिनमै यसको असर देख्न सकिन्छ । राती अबेरसम्म नसुत्ने मानिसमा धुम पान गर्ने वा अनियमित निन्द्राको परम्परा विकसित हुन थाल्छ ।
निन्द्राको कमी, एक्सरसाइजको अभाव, सँधै घरभित्र रहने र धेरै समय अध्याँरोमा बिताउनाले डिप्रे शन सहित अन्य विभिन्न रोगहरुको जोखिम बढाउँछ ।यी हुन् बिहान सबेरै उठ्नुका फाइदाः१. बिहान सबेरै उठेमा ताजा र शुद्ध हावा मिल्छ जसले तपाईंको फोक्सो स्वस्थ हुन्छ ।. बिहान चाडैं उठेर कसरत गर्दा मु टुरोगको स म्भावना धेरै कम हुन्छ ।
शरीरमा रक्त सञ्चार पनि सहि रहन्छ । ब्लडप्रेसरको समस्या निम्तिदैन ।३. बिहान छिटै उठ्नाले डिप्रेश नको स मस्या हुँदैन । योगा र प्राणायाम गर्नाले मानसिक रोगहरु टाढा हुन्छन् ।४. बिहान उठ्नु केवल स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन बरु यसले सामाजिक भावना पनि जोडिराख्छ । बिहानै उठेर हिँडडुल गर्नाले नयाँ नयाँ मानिसहरुसँग भेट हुन्छ र नयाँ विचारहरुको आदानप्रदान हुन्छ ।